La-taliyayaasha Ogolaanshaha Kulliyada ee ugu sarreeya ee la shaqaaleysiiyo 2021
Dabeecada bini'aadamka waa in aan rabno in aan ku noolaano nolol dheer oo farxad leh oo aan sii wadno dadaalka aan ku gaarno taas; Mid ka mid ah shay door weyn ka ciyaara inuu naga caawiyo inaan ku noolaanno nolol nabad iyo farxad leh waa shaqo guul leh.
Xirfadda guusha leh waxay ku siin kartaa lacag iyo awood kugu filan si aad bulshada dhexdeeda ugu sii ahaato oo aad u buuxiso baahiyaha qoyskaaga. Xirfadda guusha leh maaha mid sahlan in la gaaro sababtoo ah waxay u baahan tahay dhismo badan waxayna u baahan tahay dadaal badan.
Dadka qaar ee ka soo jeeda dhallin-yarada waxa ay niyadda ku hayaan himilooyinkooda, wayna u hirgashaa, balse taasi maahan arrin dadka badankiis ku dhacda, waayo dadka intooda badan waa in ay la qabsadaan dhammaan isbeddellada iyo isbeddellada nooc kasta ah marka ay koraan.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan dhismahan wuxuu ku bilaabmaa da'da yar, arrimo badan ayaana door muhiim ah ka ciyaara. Kulliyaddu waa mid ka mid ah wax yaabaha qofka ka caawiya in uu han iyo ixtiraam ka dhex helo asaagiisa una horseeda shaqo guul leh.
Qaadashada shahaado jaamacadeed waxay u furaysaa fursado badan oo loogu talagalay qofka hadda u tallaabaya nolosha dhabta ah; waxay kaa caawinaysaa inaad garaad ahaan iyo bulsho ahaanba u koraan. Waxa la arkay in shakhsiyaadka haysta shahaado jaamacadeed ay ka helaan mushahar ka badan celcelis ahaan oo ay ka helaan shaqo ka xasilloon marka loo eego dadka aan haysan shahaado jaamacadeed.
Si kastaba ha ahaatee, helitaanka shahaado kulliyad ma aha mid fudud sida ay u egtahay; xitaa waxyaabaha ugu muhiimsan, sida gelitaanka kulliyadda, waxay yeelan karaan jahawareer.
Si looga fogaado dhibaatooyinkan oo kale marka gelitaanka, waxa ugu fiican ayaa noqon doona in la shaqaaleysiiyo la-taliyaha gelitaanka kulliyadda.
Lataliye aqoon sare leh ayaa kula jooga inta lagu jiro nidaamka gelitaanka kulliyadda, laga bilaabo qorista qoraallo tayo leh ilaa u diyaarinta waraysiyada; wax walba way kaa caawinayaan. Laakiin dhibka haysta dad badan ayaa ah in aanay garaneyn la taliyaha ay shaqaaleysanayaan. Si taas kaaga caawiyo, waxaanu samaynay liis ah qaar ka mid ah la-taliyayaasha gelitaanka kulliyadda ugu fiican ee aad shaqaaleysiin karto.
Sulaymaan Admissions Consultant
Khabiir kale oo ku jira warshadaha waa La-taliyaha Ogolaanshaha Sulaymaan ee aadka loo amaanay. Si fiican u yaqaana caawinta ardayda inta lagu jiro safarka adag ee gelitaanka kulliyadda, kooxdu waxay la imanaysaa qalabaysan sannado badan oo waayo-aragnimo ah kulliyadaha caanka ah ee Solomon's.
Waxaa intaa dheer, guusha adeegyadooda marnaba lama qarin doono maadaama ururku yahay mid aad u hufan natiijooyinkiisa. Iyada oo leh heerar sare oo guulo ah, tababarayaal qoraal ah oo xirfad leh, iyo hab cad oo la sameeyay, waxay ujeedadoodu tahay inay helaan shaqada bilawga ilaa dhamaadka.
Admissionado waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican adeegyada la-talinta gelitaanka kulliyadda waad heli kartaa, oo xaqiiqo xiiso leh oo ku saabsan waxa ay tahay in aan aasaasay laba saaxiibo jaamacadeed 2007. T
hey waa kuwa ugu sarreeya liiskayaga sababtoo ah waxay leeyihiin mid ka mid ah la-taliyayaasha ugu khibradda badan ganacsiga. Maadaama ay ganacsi ku jiraan, waxay dib u eegeen kumanaan codsade waxayna leeyihiin in ka badan 1000 la-taliye oo magacooda wata.
Admissionado waa adeeg latalin sare sababtoo ah kuma garaacaan baadiyaha oo waxay ula dhaqmaan macaamiishooda hab toos ah.
Maadaama ay haystaan ​​la-taliyayaal badan oo khibrad leh oo hal saqaf ah hoostooda ah, waxay u qaybiyeen macmiil kasta shaqadiisa natiijooyinka ugu sarreeya. Tusaale ahaan, waxaa jiri lahaa khubaro kala duwan; mid ayaa ka shaqayn doona qormooyinka, halka ka kalena uu ka shaqayn doono codsiyada.
Adeegga la-talinta ee soo socda ee liiskayaga ku jira waa udiyaarinta Veritas oo ciyaarta ku jirtay ilaa 2002, iyo wakhtigan oo dhan, waxay helayeen macaamiil badan. Ma haystaan ​​koox la-talin ah oo la mid ah sida Admissionado, laakiin wali waxay bixiyaan adeegyo la-talin oo heersare ah dhammaan noocyada kala duwan kulliyadaha.
Waxay la shaqeeyeen 300,000 oo arday ilaa hadda, Veritas Prep waxay caan ku tahay gelitaanka bachelor-ka, laakiin waxay sidoo kale bixiyaan talo khabiiro barnaamijyada MBA. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badan iyaga ayaa ah inay sidoo kale bixiyaan adeegyo ardayda fasalada 7aad iyo 8aad oo ay bixiyaan qiimayn muuqaal ah oo bilaash ah.
Haddii aad rabto adeeg la-talin oo jiray in ka badan 20 sano ayaa leh dhowr arday oo la doortay oo kaliya oo ay la shaqeeyaan, markaa IvyWise waa inay noqotaa go-tog. IvyWise sidoo kale waxay leedahay qaar ka mid ah xirfadlayaasha iyo la-taliyayaashii ugu khibradda badnaa, laakiin waxay leeyihiin kooxo ka kooban agaasimayaal hore iyo hormuudyada qaar ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya.
Waxyaabaha ugu wanaagsan ee iyaga ku saabsan waxaa ka mid ah inay haystaan ​​arday ka kala timid 40 waddan oo ay haystaan ​​rikoodh la xaqiijiyay oo ay la socdaan ku dhawaad ​​dhammaantood. Sida laga soo xigtay shabakadooda, 92% ardaydoodu waxay helayaan ogolaanshaha 3da jaamacadood ee ugu sareeya.
IvyWise sidoo kale waxay bixisaa dabacsanaan dhamaystiran ee habka xulashada lataliyaha; waxay leeyihiin la-taliyayaal khibrad u leh waxyaabo kala duwan oo ka caawin kara ardayda hadba baahida ay qabaan.
PrepScholars waa mid ka mid ah jaban iyo ka mid ah lataliyayaasha ugu sareeya ee gelitaanka kulliyadda waxaad ka heli doontaa liiskan midkood ama guud ahaan; si kastaba ha ahaatee, adeegyadooda sinaba uma yara.
Sida IvyWise oo kale, PrepScholars waxay sidoo kale siiyan adeegyo ardayda adduunka oo dhan waxayna leeyihiin heer guul ka wanaagsan kan IvyWise, kaasoo ah 96%. Kadib waxay adeegyo siiyeen tiro arday ah oo raba inay galaan kulliyad ama barnaamij qalin jabin.
Waxay kuu diyaariyaan dhammaan noocyada imtixaanada sida SAT, GMATs, iyo PSATs, mid ka mid ah waxyaalaha ugu fiican iyaga ayaa ah inay caawiyaan ardayda xitaa ka dib markay ardaydu dhammeeyaan codsiyada. Qiimo jaban, adeegyada ay bixiyaan waa u qalmaan.
Kaliya magaca, waxaad qiyaasi kartaa in marka aad shaqaaleysiiso, aad kaliya ka heli doonto adeegyada khubarada; waxay khibrad sannado ah u leeyihiin adeegyada la-talinta waxayna caan ku yihiin diyaarinta SAT iyo ACT-yada.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan PrepExpert waa haddii aadan awoodin, waxaad sidoo kale ka codsan kartaa inay ku siiyaan la tashi bilaash ah; Marka laga reebo la-talinta bilaashka ah, waxaad sidoo kale bixin kartaa khidmad yar oo waafaqsan miisaaniyadaada.
Way ka duwan yihiin adeegyada kale ee ugu sarreeya ee la-talinta sababtoo ah kama koobna koox la-talin ballaaran.
Heerarka ugu sareeya
Ugu dambayn, laakiin ugu yaraan, adeegga la-talinta ee soo socda ee liiskayaga ku jira waa Heerarka Sare ee Ogolaanshaha. Waxay jirtay muddo dheer, in ka badan 20 sano in la saxo, waxaana loo tababaray shaqaale khibrad leh oo ka shaqeeya xafiiska ogolaanshaha ee qaar ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan.
Xirmooyinka kala duwan, waxay sidoo kale leeyihiin xeryo bootin oo ka caawiya ardayda inay tirtiraan dhammaan arrimaha iyagoo la kulmaya khabiirada fool ka fool.
Xusuusin kama dambeys ah
Kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah la-taliyayaasha gelitaanka kulliyadda ugu wanaagsan ee aad shaqaaleysiin karto 2021, la-taliyayaashani waxay hubin doonaan inaad gaarto yoolalkaaga oo aad siiso waxa ugu fiican gelitaanka kulliyadda iyo waqti ka dib markaad gasho. Waxaa laguu ballan qaaday inaad horumar ka gaadhi doonto wax kasta laxidhiidha gelida kuleejka marka aad caawimo ka hesho adeegyada aan soo sheegnay.
Previous Post:Sida Loogu Soo Bandhigo Astaamahaaga Shakhsiyeed Bandhigyada Xirfadaha Onlineka iyo Dhacdooyinka Isku Xirka
Post Next:Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato sharciyada socdaalka UK